Wayzọ Anyị Si Arụ Ọrụ Email Na-agbanwe Agbanwe | Martech Zone
N'ime ụwa ebe ezigara email karịa mgbe ọ bụla (elu 53% site na 2014), ịghọta ụdị ozi ezigara, yana mgbe ezigara ozi ndị ahụ bara uru ma dị mkpa. Dị ka ọtụtụ n’ime unu, igbe ozi m enweghị njikwa. Mgbe m gụrụ banyere igbe efu, Enweghị m ike inyere ma obere inwe nchekwube banyere olu na n'ụzọ nke ozi ịntanetị na-azaghachi.
N'ezie, a sị na ọ bụghị SaneBox na MailButler (n'iji m Ntuziaka njikọ e), M na na na na otú m ga-eme m email. Sanebox na-arụ ọrụ dị egwu n'ịmụta nke n'ime ozi ịntanetị m chọrọ nlebara anya na MailButler na-enye m ohere igbu oge nzaghachi, zoo ozi ịntanetị, ma bulie Apple Mail na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Ihe jikọrọ ya na nyiwe abụọ bụ na a na-edozi igbe mbata m n'etiti folda. Anaghị m ejedebe na naanị Igbe mbata, nchekwa Junk, na ahịhịa ọzọ systems sistemụ ndị a na - ebugharị ozi na ọtụtụ folda ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ndị a bụ nnukwu ngwaọrụ maka m, ha ga-ebibi mbibi email nke ndị zitere na-achọ iru m. Omume email is na-agbanwe agbanwe, na ngwaọrụ ndị a bụ naanị otu ihe atụ nke otu.
Iji nyochaa mgbanwe omume email, ReachMail nyochara mmadụ 1000 na nso nso a iji mụta ihe ọ pụtara ijikwa igbe igbe ha. Keyfọdụ isi nchoputa:
Email ningtụtụ - 71% nke ndị America na-elele maka oge mbụ n’agbata elekere ise nke ụtụtụ na elekere anya 5 nke ụtụtụ na New York na New Jersey na -eleta nyocha izizi kachasị ọhụrụ — obere oge tupu elekere itoolu nke ụtụtụ — na ndị mmadụ na Utah na-ebu ụzọ eleba anya, mgbe ọ gachara elekere 9:9 nke ụtụtụ.
Anyasị Email - 30% nke ndị America na-elele tupu elekere 6 nke ụtụtụ na 70% mgbe elekere isii nke mgbede 6% nke ndị Virginians na-elele email ha maka oge ikpeazụ n'etiti elekere 46 nke abalị na etiti abalị, ebe 9% na-agwụcha mgbe etiti abalị. Agaghị emezu, 13% nke ndị Tennesseans bụ ikwiikwii abalị ibe, na-elele email ha mgbe elekere 71 gachara, ma naanị 9% lelee ikpeazụ tupu elekere 12 nke abalị, nke dị ala karịa ọkwa mba.
Izipu ozi ịntanetị - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị America niile (46%) zigara ihe na-erughị 10 email kwa ụbọchị. 30% nke ndị mmadụ na-eziga 10 na 25 email kwa ụbọchị, 16% zipụ 25 ka 50, na 8% zipụ karịa 50 email kwa ụbọchị. N'ebe ọdịda anyanwụ West nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ala nke ozi ịntanetị ezigara, na 18 kwa ụbọchị. N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ na-ekpuchi mpaghara niile na nkezi 22 na-ezigara ozi ịntanetị kwa ụbọchị, ebe Massachusetts nwere ozi ntanetị 28 nke ezigara kwa ụbọchị, na nkezi.
Response Oge - 58% nke ndị America na-ekwu na ha na-aza ozi ịntanetị n'ime otu awa. 26% na-aza n'ime otu elekere isii, 11% na-aza n'ime isii ruo awa 24 na 5% fọdụrụ na-aza mgbe awa 24 gachara, na nkezi. Ndị Virginians na-akọ akụkọ email kachasị ọsọ na oge nzaghachi oge naanị ihe karịrị awa abụọ. New Yorkers, na ihe ijuanya, nọ na njedebe nwayọ-12% na-ekwu na ha nkezi otu ụbọchị ma ọ bụ karịa ịzaghachi na 33% na-ewe ọ dịkarịa ala awa isii.
Ozi-e-agụghị - Ihe karịrị ọkara nke ndị America nwere ihe na-erughị 10 akwụkwọ ozi email na igbe ọrụ ha. Akụkọ 26% nwere ihe na-erughị ozi email 50 a na-agụghị, 13% nwere ihe karịrị 100 akwụkwọ ozi agụghị akwụkwọ na 6% nwere n'etiti 50 na 100. South Carolina na-akọ akụkọ ozi ịntanetị a na-agụtabeghị, na nkezi nke 29, ebe onye na-anụ 30% nke ndị Tennesseans na-akọ na-enwe karịrị 100 email na-agụghị akwụkwọ. Midwest nwere obere, yana nkezi nke 17.
ReachMail mepụtara ihe omuma a: Igbe mbata nke America 2: Nnabata iji gosi mgbanwe.
Tags: igbe mbata americanigbe mbata american 2email emeghe ogeoge nzaghachi emailozi ịntanetị oleonye na -eziga ozirute oziigbe nchekwangukoozi-e-agụghị agụ
SEO: Tredị 5 iji bulie Google Search Organic Search